IZIQITHI ZEKHITSHI ZANGOKU EZINGAMA-33 (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iziqithi zeKhitshi zaNgoku ezingama-33 (Iingcamango zoyilo)
Iziqithi zeKhitshi zaNgoku ezingama-33 (Iingcamango zoyilo)
Wamkelekile kwigalari yeziqithi zasekhitshini zale mihla. Apha uya kufumana iziqithi ezitsha zekhitshi ngezitayile ezimangalisayo, izixhobo kunye nokugqitywa. NgokukaMbutho weSizwe waBakhi bamaKhaya ngaphezulu kwama-70% abathengi bafuna ikhitshi elinesiqithi, kwaye ubuncinci ama-50% babone isiqithi njengesona kufuneka ukuba sinaso. Apha ngezantsi sidibanise i-33 yeziqithi zethu ezizithandayo zekhitshi zokusebenzisa izimvo kunye nenkuthazo.
Ikhitshi lale mihla liboniswe kumfanekiso ongentla libonakala likhulu kwaye libanzi ngezinto ezisetyenziswayo. Isiqithi sekhitshi kunye nekhabhathi zikhulu, kodwa indawo ethe kratya inikwe intshukumo ngomthi we-oki wegolide ogqunywe ziikhabhathi ophakanyiswe eludongeni njenge-oveni embindini. Isiqithi esikhulu sekhitshi esinesiseko esomeleleyo sokukhanya okungwevu kunye ne-countertop engwevu ibambe isinki kunye neqonga eliphakamileyo elinama-laminate enziwe ngamaplanga ukubonelela ngendawo yokuphumla okanye yokutya. Ngaphantsi kweli qonga liphakamileyo, indawo iyahombela kwaye izitulo ezine ezineenyawo zentsimbi kunye neplastikhi eyenziwe ngomthi ngaphezulu. Isithuba sijongeka njengangoku ngemibala eqinileyo engwevu nemhlophe, kodwa i-vibe yendalo inikwa ziiplanga zomthi.
iilokhwe zindwendwe zemitshato yasebusika
Iingcamango zanamhlanje zeSiqithi seKhitshi
Iziqithi zasekhitshini zanamhlanje ezineentsimbi zesidlo sakusasa ziyafunwa njengoko zivumela abahlobo kunye nosapho ukuba batye kunye ne-hangout ekhitshini ngelixa ukutya kulungiswa kwaye kuphekwa. Esi yindawo enkulu yekhitshi edibanisa ukugqitywa kweenkuni ezimbini ukufezekisa oku kujongeka. Isiqithi sasekhitshini kunye neekhawuntari eziphambili zisebenzisa i-zebra eyenziwe ngomthi omhlophe oqinileyo, ngelixa iikhabhathi eziphakamileyo kunye neekhabhathi ezigcweleyo zonke zinamabala ngombala omnyama we-wengue, ngokuchaseneyo kakuhle neengcango zeglasi ezenziwe ezimhlophe zekhabhathi ephezulu.
Eli khitshi lincinci lala maxesha, kodwa lineentlobo ezintle kunye nokudityaniswa kwezinto, zenza uyilo olulungeleleneyo noluthandekayo. Mhlophe iindonga zipeyintwe ngombala omhlophe ocacileyo, udonga olusisigxina lunombala okhethekileyo ongwevu / wesilivere onepateni efana nokugqitywa kwekhonkrithi okanye ukupeyinta okupeyinti. Oku kubonelela ngesheen entle kunye nephethini eludongeni. Iikhabhathi zekhitshi zonke ziimodyuli ezilaminishwe ngombala omhlophe kwaye zityhala ukuvula iihardware, ishenxisa isidingo sokutsala iidrowa okanye amaqhina.
Isiqithi sifakwe ipearlite yeklasikhi eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nesibini esineglasi yemizobo yegrafikhi ebuyela umva. Embindini wekhitshi, kukho ibha yokunqongophala / ikhawuntara elaminethiweyo ekugqityweni kweenkuni ezinamathela eludongeni lwe-aksenti yemidiya ngokuchasene nephepha lodonga kwaye ilaminishwe kwithoni efanayo yomthi kunye namanqwanqwa ongezelelweyo kwilamineti efanayo emhlophe njengeekhabhathi zekhitshi .
Uyilo oluvulekileyo lweli khitshi linika imvakalelo ebanzi kakhulu, kwaye ukudityaniswa kweetoni zomthi eziqaqambileyo kunye nokuqaqambileyo kuyahlaziya kwaye kuyathandeka emehlweni. Kukho ukukhanya okwaneleyo kwendalo kweli khitshi, kuyenza ibonakale ikhanya ngaphandle kokusebenzisa iithayile zomgangatho omnyama. Kwikhitshi ngokwalo, iikhabhathi zilaminishwe ngepine emthubi, zizinika ithoni e-orenji eqaqambileyo, kwaye ifakelwe ngombala oqinileyo ongwevu wecomputer kunye namacala eekhawuntari. Uyakuqaphela ukuba kukho iziqithi zasekhitshini ezi-3 kwaye akukho khabhathi zingaphezulu kolu luyilo lwekhitshi, okwenza ukuba indawo ephezulu yendawo ingaphazanyiswa, yiyo loo nto isenza ukuba indawo ibonakale inkulu.
Sebenzisa ii-laminates zendalo ze-oki zendalo, oku uyilo lwangoku lwekhitshi isithuba siya kujongwa ngesibindi. Uyabona ukuba ukugcinwa kwandiswa ngokusetyenziswa kweekhabhathi eziphakamileyo. Nkqu nekhabhathi ezingaphezulu zilandela imo ebekiweyo yesilingi, zisebenzisa yonke indawo ekhoyo yokugcina eyongezelelweyo. Ukuthambisa ithoni e-orenji eqaqambileyo ye-laminates ye-oki, igranite enethowuni esetyenziselwa ukhilimu yasetyenziselwa zombini ikhawuntala ephezulu kunye nomqolo ongasemva.
Eli khitshi lihle linika imvakalelo yendalo ngokudibanisa okumhlophe kunye nokugqitywa kweenkuni, kunye neefestile ezinkulu ezijonga indawo eluhlaza eluhlaza ngaphandle. Imigangatho igutyungelwe ngeplastikhi yomthi wom-oki, ngelixa umthunzi oshushu webala lomthi wom-oki usetyenziselwa ukuhambisa iimpahla kunye neekhabhathi ezisisiseko. Imiphezulu yeetafile igutyungelwe ngee laminates ezimhlophe ezimenyezelayo, kwaye akukho zikhabhathi zingaphezulu ukunika ugxininiso kumbono omhle ngaphandle njengoko ubonwa kwiifestile ngosinki.
Iziqithi zasekhitshini zale mihla zihlala zisetyenziswa njengeziko eliphambili lokupheka kunye nokulungiselela ukutya kwisithuba. Esi siqithi sikhulu sanamhlanje siqulathe uluhlu lwegesi kunye nendawo yokuphambana macala onke ukulungiselela igumbi ukutya. I-antique teak flooring kunye neeplanga sele zinike le khitshi enkulu ukuba ibe sisibheno esihle, kwaye uphahla lwayo oluphezulu lwenza ukuba lubukeke lumoya kwaye lubanzi nangona iindawo zomthi zinzima. Kuba iindonga zinombala omhlophe ocacileyo, iikhabhathi zasekhitshini ezisetyenzisiweyo zonke zinamabala amnyama kwaye zifakwe imabhile emhlophe. Ikwasebenzisa iithayile ezibuyela umva ngombala ongwevu ongaphantsi kweglasi, ukongeza ubume obufihlakeleyo kunye nepateni kwindawo.
Le khitshi inomdla obonakalayo onomdla kwaye onamandla, kwaye ukuyigcina ijongeka inzima kakhulu, kugqityiwe kugcinwa kulula, kodwa kubukeka. Iincopho zekhawuntari zonke zimhlophe gca, zisebenzisa umphezulu omhlophe oqinileyo kweso counter esingagungqiyo. Iikhabhathi ezisisiseko kunye neekhabhathi ezingaphezulu, kwelinye icala, zinamathiselwe kwi-wengue emnyama, ehambelana nophahla lwe-accent drop ekhitshini.
amagumbi okulala amnandi entombazana
Uphahla oluphezulu kunye neefestile ezinkulu zenza ukuba eli khitshi libukeke likhulu kunokuba linjalo. Uyilo lwekhitshi lulula kwaye luthe tye, luthelekisa kakuhle nembonakalo yemizi-mveliso yoyilo. Ukugcinwa ngokulula, iikhabhathi ezisisiseko ziphakanyisiwe kwimilenze yentsimbi engenasici, nto leyo eyenza ukuba kube lula ukukorobha phantsi kweekhabhathi ezimhlophe. Le khitshi inayo Isiqithi esikhulu sekhitshi , kodwa ilaminishwe ngombala kwaye yafakwa into efanayo emhlophe eqinileyo njengayo yonke ikhitshi.
Eli khitshi lineziqithi ezibini zekhitshi apho iikhabhathi ezisisiseko zibekwe ngobuchule, ukulungiselela izixhobo zekhitshi kakuhle kwaye zigcine indawo icocekile. Ikhabhathi engaphezulu inokufumaneka kwicala lasekunene ngefestile, ejonge amanzi acocekileyo. Imiphezulu yeetafile igutyungelwe lilitye elimdaka ngombala, umatshisi olungileyo kumgangatho weplanga matte kunye nezitena ezigqume udonga kwiholo yokutyela. Izibane ezihonjisiweyo ezihonjisiweyo ezihonjiswe ngombala omdaka zihombisa igumbi kwaye zingoyena mthombo wokukhanya ebusuku, kuba ukukhanya okukhulu kwendalo kuvunyelwe ngaphakathi ngefestile.
Eli khitshi linobukeka obuthambileyo, obuhlanjwe ngaphandle ngenxa yokhetho lweplanga laminate kunye nezinto zaphantsi. Yomibini imigangatho kunye neekhabhathi zekhitshi zisebenzisa i-oki ekhethiweyo, inika indawo umbala othambileyo. Oku kudityaniswe nomphezulu omhlophe oqinileyo, i-wengue-laminated bar counter yokuthelekisa kunye nokubuyela umva kunye nokugqitywa kweenkuni ze-teak.
Olu lolunye ulwakhiwo lwekhitshi olulula nolusebenzayo kusetyenziswa iikhabhathi ezimhlophe ezilaminishwe. Umphezulu wokukhanya wekhabhathi awuniki kuphela ikhitshi elijongeka licocekile, kodwa ikwavumela ubhetyebhetye njengoko inokudibanisa ngokulula kunye nezitayile zemveli ezininzi zangaphakathi ingakumbi kwimeko yokuyilwa okuvulekileyo. Kule khitshi, izinto ezingaphezulu ezisetyenziswayo zizitayile zelitye zendalo, zinika umphezulu ubungqongqo obunamandla.
Iikhabhathi ezimhlophe zale khitshi yanamhlanje ngokuqinisekileyo ime ngaphandle kweendonga ezingwevu, kwaye nomgangatho osetyenziselwa ikhitshi wahlukile kwezinye iindawo. Endaweni yentsingiselo yentsimbi yokuchwetheza, iinkuni kukugqitywa kokukhethwa kweekhawuntari, ngelixa i-backsplash ilinga ngakumbi ngemibala, kusetyenziswa indibaniselwano yesilivere, i-violet kunye nomhlophe.
Le yenye ikhitshi yanamhlanje eneekhabhathi ezimhlophe ezilaminishwe emhlophe kunye nezinto zokubala ezimhlophe eziqinileyo zomhlaba. Elinye ikhawuntari liphindwe kabini njengendawo yokutyela, kwaye endaweni emhlophe, iikhabhathi ezingaphantsi kwayo zihlanjululwe ngombala wamalahle, lukhetho olusebenzayo kuba umhlophe unokungcola ngokulula kuba uya kutyhilwa kwizihlangu / iinyawo zedinala.
eyona ngoma ithandwayo yokuqala yomdaniso
Ngomgangatho omnyama ongwevu kunye neendonga ezingwevu, imvelaphi emnyama isetiwe, inceda iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi. I-laminated esetyenzisiweyo kweli khitshi igqityiwe nge-matte, ukuyinika isibheno esingaphezulu. Kwitafile yayo, kwakusetyenziswa umphezulu oqinileyo ongwevu kwaye ubhangqiwe ngeethayile zeceramic ezingwevu ezifanayo.
Le khitshi intle yodwa isebenzisa umbala we-lilac ukwenza indawo yoyilo lwangoku. Indawo ezikuyo izinto azilingani, iindonga kunye nesiqithi sekhitshi zibekwe zaza zaphambana. Ngaphandle koku, eli khitshi ligcinwa licocekile kwaye lilungelelene neekhabhathi ezisisiseko ekugqityweni kwe-lilac eqinileyo, enezinto zokubala ezimhlophe. Ngodonga, iikhabhathi ezingaphezulu ezintathu zazifumaneka kwisiphelo esimhlophe esimhlophe. Ezinye iindlela ezisetyenziswayo zizitulo ezinenyawo zentsimbi kunye nezihlalo ze-lilac, kunye nesityalo esidubula iintyatyambo kwityotyombe lokuloba.
Le khitshi inemibala eqaqambileyo kwaye ikhanyayo kuyo ngenxa yemibala ekhethiweyo kunye nokugqitywa kwayo. Iindonga zigcinwa zimhlophe ngokucacileyo, kodwa udonga olubuyela umva lunika unyango olwahluke ngakumbi, kusetyenziswa iglasi yegraphicote eluhlaza okwesibhakabhaka. Iikhabhathi zekhitshi zilaminishwe nge-pine, ziyinika ithoni e-orenji eqaqambileyo, kwaye zine-top white counter counter counter.
Njengokuba iindonga zesithuba sele zinobungqingqwa obukhethekileyo nobunzima bezitena ezibomvu, ikhitshi ligcinwa langoku kwaye lincinci ukuba lithelekise nobunkunkqele beendonga. Iikhabhathi zonke zimhlophe kwaye zineendawo ezimhlophe eziqinileyo. Isambatho esimnyama esimnyama sokugquma ngaphezulu kwento yokubamba yesiqithi songeza umahluko owamkelekileyo wombala kunye nokuthambeka ngaphandle kokuxakekisa kakhulu - nangoku ukuvumela ulungelelwaniso ngokuchasene neendonga ezinombala kunye nomgangatho omnyama wendawo.
Ngesicwangciso somgangatho ovulekileyo, eli khitshi likhangeleka liqaqambile kwaye libanzi nangona kusetyenziswa iithayile zeceramic ezimnyama ezingwevu kumgangatho wayo. Iikhabhathi ziikhabhathi zemodyuli ezilula ezenziwe ngomthi womthi wom-oki, ngokudityaniswa kweengcango zeglasi ezenziwe ngomthi. Isiqithi sasekhitshini sine-granite emnyama, ngelixa ezona zinto ziphambili zinemabhile, zongeza into yeklasikhi kwindawo yanamhlanje yekhitshi.
Le khitshi inemibala eyahlukeneyo kunye nokuhanjiswa okuqhubeka kwindawo yonke. Imigangatho yeRustic Oak, iindonga ezibomvu ezinamakhethini anepateni, esi sithuba sincinci sekhitshi sikunika iintlobo ezahlukeneyo. Iikhabhathi zasekhitshini zizinto ezisisiseko zeekhabhathi ezifakwe ipeyinti ekugqityweni kwepeyinti emhlophe, kodwa oku kudityaniswe nabadwebi abaphezulu ekugqityweni kwe-walnut ye-rustic kunye ne-dark beige surface eqinileyo. Igalelo kwinxalenye yemibala kunye noburhabaxa kwisitayile yiglasi enemibala esetyenziswe kwi-backsplash, ngokudityaniswa kwegrey nomhlophe.
unganxiba mnyama emtshatweni
Ngaphandle kwesikimu sombala omnyama nomhlophe osisiseko wekhitshi langoku, uya kuqaphela uyilo olwahlukileyo lwale khitshi. Iindonga ezimbini zihlala ngokupheleleyo ngeekhabhathi eziphakamileyo, kwaye ezi khabhathi ziyadada, njengoko ingachukumisi imigangatho kwaye zonke zinamathele ngokupheleleyo kwiindonga zenkxaso. Isidumbu sekhabhathi senziwe nge-ebony elaminethiweyo, sibiyela iingcango zekhabhinethi emhlophe. Kwikhawuntara yesiqithi, isiseko senziwe ngombala omnyama we-matte kwaye sifakwe ikhawuntari emnyama yegranite kwaye sinekhawuntari esezantsi ukulungiselela ukutya, ilaminishwe ngombala weplanga we-cherry.
Ikhitshi elisisiseko kakhulu langoku elinendawo encinci kunye nokukhanya okwaneleyo kwendalo. Ngenxa yesithuba esilinganiselweyo, inye kuphela ikhabhathi encinci encinci, kwaye imibala ekhanyayo ikhethiwe ukuyigcina ijongeka ilula kwaye inomoya. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zazilaminishwe ngombala omhlophe zaza zafakwa ityuwa engwevu kunye nephepha legranite. Inendawo yokuhombisa esetyenzisiweyo njengendawo yokubala, kwaye ine-cherry egqibeleleyo, enceda ukongeza umbala ofudumeleyo kwisithuba.
Ngelixa iikhabhathi eziphambili zekhitshi zilula zonke ezimhlophe ezimhlophe eziphakamileyo, ikhawuntari yebha yahlukile. Amacala kunye nobuso beekhawuntara zebar zihlala ziilaminates okanye ilitye elinye elisetyenzisiweyo kumphezulu wekhawuntara, kodwa kulo mzekelo, kwasetyenziswa i-onyx ebuyiselwe umva kwaye yafakwa umphezulu omnyama wokubala. Ukukhanya kunika ukukhanya okufudumeleyo okunceda ukuqaqambisa ikhawuntari kwaye kuyenze ibe yinkwenkwezi ekhitshini.
Le khitshi ichanekile, icocekile, kwaye ilula. Isebenzisa umbala omhlophe oqinileyo ezindongeni, kwiikhabhathi ezingaphezulu ezingenamthungo, kunye nakwiitafile. Indawo eseleyo yekhabhathi, ecaleni kwesiseko sesiqithi sekhitshi kunye nomgangatho ogqunywe ngamaplanga alungisiweyo. Iimpawu zokubonisa kuphela ezinokufunyanwa kwigumbi ziincam zekhabhathi zentsimbi ezingenasinxibo kwiikhabhathi ezide kunye nesinki. Ukulula kwamagumbi kuvumela ukuguquguquka kwesitayile kunye nokwandisa ukusebenza kwegumbi.
Iziqithi zasekhitshini zale mihla zihlala zijongeka zinesitayile ngemigca ethe tye kunye nokugqitywa okuhle. Kulo mzekelo, kukho indawo encinci yokulinganisa / umda oqhotyoshelwe kwisiqithi sekhitshi esiqinileyo se-mahogany, esinceda ukongeza ubume kunye nombala kwisithuba. Iikhabhathi zasekhitshini zilaminishwe ngombala omenyezelayo, zidityaniswe nomhlaba oqinileyo omnyama oqaqambileyo kuzo zombini i-counter top kunye ne-backsplash. Iindonga zimhlophe gca, kodwa imigangatho yeyombala we-oki omdaka. Umhlophe unokuthanda ukuba uyadika kwaye ujongeke, kodwa ngokudityaniswa okufanelekileyo kweminye imibala kunye nezinto ezenziweyo, unokwenza ibhalansi efanelekileyo kwaye ube nakho ukuphumeza ikhitshi emhlophe ecocekileyo ngaphandle kokuyenza ibonakale ikruqula.
Isiqithi sanamhlanje sekhitshi esinendawo yokuhlala
Eli khitshi elinobunkunkqele liphawulwa ngamatye amakhulu emarmore emarmore. Iibhloko ezingaphezulu kunye nezisisiseko zimhlophe ngokuqinileyo, ngelixa i-backsplash kunye ne-countertop zigutyungelwe ngamatye emhlophe emhlophe. Isinki ilungile ecaleni kwefestile, ngelixa isitovu silele kwisiqithi sekhitshi esinesiseko esimhlophe esifanayo nesitafile semabhile. Izitulo ezintathu ezineenyawo ze-mahogany kunye ne-pink upholstery zilele kwelinye icala lesiqithi sekhitshi ukubonelela ngendawo yokuphumla kunye nokutya okulula.
Ibekwe kwindawo emhlophe emhlophe yanamhlanje, le khitshi imnyama mahogany ime kakuhle kwindawo emhlophe yegumbi. Zonke iikhabhathi zazifakwe ngokufanayo kwi-mahogany emnyama kwaye zine-white top top counter counter. I-backsplash isebenzisa i-graphicote graphicote, inika umbala omnandi wombala kwisithuba.
Imibala emnyama kunye nomhlaba yenza ukuba le ndawo yanamhlanje yekhitshi ibonakale intle kwaye inzima. Ngelixa iikhabhathi zesidumbu kunye neengcango zekhabinethi zihlala zinombala ofanayo, lo mzekelo usebenzisa iingcango zelaminethi yaseMelika kunye namalahle. Kwikhabhathi eziphambili kwakusetyenziswa isitya esimhlophe esimhlophe esomeleleyo, ngelixa kwakusetyenziswa i-quartz enombala wamalahle ekhitshini. Ukusetyenziswa kwetiles emnyama yesileyiti emnyama, kwaye ngenxa yemibala emnyama esetyenzisiweyo kwiikhabhathi zasekhitshini, iindonga zazipeyintwe ngombala otyheli okhanyayo ukunceda ukukhanyisa indawo.
Olu luyilo lwekhitshi ludibanisa ukubukeka kwekhabinethi yendabuko kunye ne-aesthetics yanamhlanje. Idibanisa iingcango zekhabhinethi zasekhitshini ezimhlophe ezihonjiswe ngamaplanga ezimnyama kunye neengcango ezimnyama ezixhonyiweyo ezazigobele ukulandela ubume oburhabaxa bekhawuntara yesiqithi. Kwi-backsplash, iithayile ezisetyenzisiweyo ziithayile zeglasi enombala omfusa kunye nelilac ukutshatisa into yokuphakamisa izitulo zebar, ukongeza umbala owamkelekileyo kwindawo.
ilokhwe yomtshato okwesibini
Uyilo olulula nge Isiqithi sekhitshi esahlukileyo ekwaziyo ukudibanisa izinto zesiko kunye nobugcisa banamhlanje. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zilaminishwe kumthi omhlophe omhlophe, ohambelana neetafile ezimhlophe ezimhlophe. Isiqithi sekhitshi sise-mahogany kwaye sinepaneli eyahlukileyo egqobhoziweyo kunye nonina-weeperile, esongeza ukuba ukuchukumisa izinto zoyilo zemveli zaseAsia ngaphandle kokwenza ukuba kubonakale ngathi akukho ndawo.
Indawo eqaqambe kakhulu ivumela ukusetyenziswa kwe-laminates emnyama ngombala ngaphandle kokwenza ukuba indawo ibonakale imnyama kakhulu kwaye inzima. Ikhabhathi yesidumbu yayihlanjululwe ngombala omnyama ngelixa iikhabhathi zasekhitshini kumthi omnyama wesable. Izinto zokubala eziphambili zekhitshi zisebenzisa igranite emnyama, ngelixa isiqithi sasekhitshini songeza ubuhle kunye nokwahlula ngokusebenzisa imarble emhlophe yeCarrara endaweni yoko.
Eli khitshi linobunewunewu kwaye lwanamhlanje lineendonga ezimhlophe ezibengezelayo kunye nomgangatho. Yintoni ebeka oku ngaphandle kukusetyenziswa kwayo okubonakalayo kwendawo yentsimbi yefanitshala yayo. Iikhabhathi zentsimbi ezingenasici zigqunywe ngeglasi enefriji eguqukayo, ngelixa iikhabhathi zentsimbi ezingenasici ziphethe imiphezulu yemarble emhlophe kunye nesinki. Isiqithi sekhitshi sinobukhazikhazi obuncinci ngezitulo zaso zealuminium kunye netafile, enezinto ezifanayo zokubeka isitovu. Ikhitshi ligcinwa licocekile, lihle, kwaye liyaphola ngefriji yentsimbi engenasici kunye nee-oveni ezihambelana nodonga.
Le yanamhlanje Isiqithi sekhitshi yesiqhelo yindawo ekugxilwe kuyo yoyilo. I-hickory yendalo elaminethiweyo esetyenzisiweyo kwiikhabhathi ezisisiseko kunye neekhabhathi zentloko ze beige inika esi sithuba sekhitshi yanamhlanje ukubukeka okuthambileyo nokufudumeleyo. Ukwenza ibonakale inzima. Ibhangqiwe ngemigca ecacileyo efana nokubala okumhlophe okuqinileyo komhlaba, izitulo zeplastiki ezimhlophe ezibunjiweyo kunye neendonga ezimhlophe ezimhlophe. Iziphumo zilula emehlweni kwaye kuyilo lwekhitshi oluguquguqukayo olunokutshatisa uninzi lweendlela zangaphakathi.
Zenzele eyakho ilokhwe yomtshato
cabo san lucas iqela le-bachelorette
Iskripthi somtshato wesibini somtshato
Isitayela se-bohemian umama weengubo zomtshakazi